साताभर १० अंकले उक्लेको नेप्सेको 'ट्रेण्ड' अब कता जाला ?
साताभर नेप्से परिसूचक १० अंकले बढेको छ। आइतबार १६३५ अंकमा रहेको नेप्से बिहीबारसम्म १६४६ अंकमा कायम भएको छ।
नेप्सेको वृद्धिदर यो साता खुम्चिएको छ। गत साता ५२ अंकले नेप्से उक्लिएको थियो। साताभर एक्स्चेन्जमा १७० कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ। कुल पाँच अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन्। कारोबार रकम गत साताको भन्दा १६ दशमलव ७५ प्रतिशत बढी हो। गत साता चार अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सेयरहरु खरिद बिक्री भएका थिए।
यो साता बैंकिङ १४ अंकले ओर्लियो। बिमा ४०७ अंकले बढ्यो। विकास बैंक ३६, वित्त १३, होटल १३, उत्पादन २०९ र व्यापार समूह १ अंकले उक्लिए। अन्य समूह २ अंकले घट्यो।
‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ०.७८ अंकले घटेर ३४६.२३ अंकमा आईपुगेको छ। यस साता कारोबार रकमको आधारमा प्रभु इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको २७ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँको कारोबार भयो।
दोस्रोमा रहेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २४ करोडको कारोबार भयो। कारोबार रकमका आधारमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी (संस्थापक) नेपाल इन्स्योरेन्स र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स उत्कृष्ट पाँचभित्र पर्न सफल भए।
त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या (आठ लाख ६४ हजार कित्ता) को आधारमा नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ। यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार कक्ष नियमित कारोबारका लागि पाँच दिन खुला रह्यो । लक्ष्मी इक्वीटी फण्ड बजारमा सूचीकृत भएको छ। लक्ष्मी बैंकको कोष प्रवद्र्धनमा जारी भएको सो म्युचुअल फण्ड यो साता बजारमा सूचीकृत भएको हो।
अबको केही दिनमै लगानीकर्ताले डिम्याट खातामा म्युचुअल फण्ड पाउने छन्। त्यस्तै छ्याङ्दी हाइड्रोको आइपिओ बजारमा सूचीकृत भएको छ। नेपाल बंगलादेश, नेपाल बैंक र लक्ष्मी बैंकको हकप्रद तथा नेरुडे लघुवित्त, संग्रिला डेभलपमेन्ट, महाकाली विकास र भार्गव विकास बैंकको बोनस सेयर बजारमा थपिएको छ।
अब कता जाला बजार ?
बजार बढ्छ वा घट्छ भन्नुभन्दा पनि त्यसका आधारभूत पक्ष केलाउनु लगानीकर्ताका लागि जरुरी हुन्छ। माथि वा तल जतातिर आधारहरु बलियो रहन्छ, ट्रेण्ड उतै जाने हो तर आधारलाई केलाउने तरिका पनि आ आफ्नै हुन्छन्। त्यसैले त एउटै समयमा कसैले बेचेको सेयर अर्कोले किनेको हुन्छ भने अर्कोले बेचेको सेयर कसैले किनेको हुन्छ।
गत वर्ष साउन १२ गते नेप्सेले ऐतिहासिक रेकर्ड १८८१ अंक कायम गरेको छ। तर यो वर्षको साउन १२ गते नेप्से १६४६ अंकमा कायम रह्यो। पछिल्ला दिनहरुमा बजारले लिएको गति उकालो नै छ। बजारलाई उकालोमा डोहोर्याउन साताभर बिमा समूह नै सक्रिय रह्यो। सो समूह अहिले निकै माथि ९६७५ अंकमा पुगेको छ।
कतिपयले अहिले बजारमा सो समूहले १० हजार नाघ्ने हल्ला चलाउँदै बढाएरै सेयर बेच्ने कोसिस पनि गर्न थालेका छन्। त्यहाँ अल्पकालीन ‘ट्रेडर्स’ बढी सक्रिय देखिन्छन्। तर दिर्घकालीन लगानीका लागि सेयर किन्नेहरु सचेत हुनुपर्ने बेला यही नै हो। कुनै कम्पनीले धेरै हकप्रद र बोनस दिँदैमा सेयरको तौल र कम्पनीको स्थिति बलियो हुने होइन। बरु सेयरको भ्यालु घट्छ र पूर्ति बढ्छ।
चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नका लागि हकप्रद र बोनस आउने भएसँगै बिमा समूह यतिबेला उच्च अंकमा पुगेको हो। तर कतिसम्मको उकालो थेग्न सक्छ भन्ने अनुमान सबैका आ आफ्नै होलान्। धेरै माथि उक्लनु भनेको जोखिम बढ्नु पनि हो भन्ने कुरालाई हेक्का राख्न नसक्नेहरु जुनसुकै बेला नराम्ररी पछारिन सक्छन्।
हकप्रद वा बोनसको प्रलोभनमा उचालिएर उच्च मूल्यमा ठीक एक वर्षअघि केही वाणिज्य बैंकको सेयर किन्नेहरुले यतिबेला राम्रैसँग महसूस गरेकै होलान्। ठीक एक वर्षअघि स्टाण्डडर्ट चार्टड बैंकको ३७ सय रुपैयाँमा सेयर किन्नेहरुले बोनस लिएर एक वर्ष हुँदा पनि नोक्सान व्यहोरेकै छन्।
त्यस्तै ८ सय रुपैयाँभन्दा बढीमा कृषि विकास बैंकको सेयर किन्नेले ५० प्रतिशत हकप्रद र २० प्रतिशत बोनसपछि पनि नोक्सान व्यहोरेकै छन्। त्यतिबेला हकप्रद र बोनसका लागि भनेर प्रतिकित्ता ८ सयमा १ सय कित्ता किन्नेको लागत ८५ हजारभन्दा बढी हुन्छ, उसँग अहिले सेयर संख्या १८० पुग्छ, बजारमा मूल्य साढे ४ सयको हाराहारीमा मात्रै छ। एक वर्षपछि पनि उसको नोक्सान ४ हजारमाथि हुन आउँछ। अझ ९ सय वा एक हजारमा पुगेका बेला किन्नेको नोक्सान कति होला ?
यसको मतलव बजार घटाउन खोज्नु भन्ने होइन। नयाँ र साना लगानीकर्तालाई बिमा कम्पनीहरुको हकप्रद र बोनसको प्रलोभनमा नपर्नुहोस्, बजारका निराधार हल्ला नसुन्नुहोस् र लगानी सुरक्षित गर्नुहोस् भन्ने मात्रै हो। अल्पकालीन कारोबार गर्नेहरु बिमामै सक्रिय रहँदा अहिले बजार बढेको हो।
आफूसँग भएको वाणिज्य बैंकहरुको सेयर बेचेर बिमामा उनीहरु तानिँदा साताभर बैंकिङ समूह घटेर बिमा समूहमा उच्च अंकको वृद्धि देखियो। तर पछिल्लो दिन बिहीबार १६० अंकले बिमा समूह घट्यो। यतिबेला सो समूहको वृद्धि रोकिएको कतिपयको अनुमान हुन सक्छ। अब सो समूहको वृद्धिदर सामान्य बढेछ भने पनि नियन्त्रण हुने संभावना बलियो छ।
बजारलाई सशक्त रुपमा डोहोर्याउने प्रमुख समूह बैंकिङ नै हो। वाणिज्य बैंकहरुले धमाधम प्रगतिशील वित्तीय विवरणहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन्। चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि धेरै कम्पनीले बोनस दिँदैछन्। चुक्ता पुँजी पुगेका बैंकहरुले पनि केही बोनसका अलवा ठूलै नगद लाभांश दिन सक्ने क्षमतामा छन्। यसले बजारलाई सकारात्मक टेवा पुग्न सक्छ। तर आपूर्ति बढेकाले तुलनात्मक रुपमा लगानीयोग्य समूह हुँदाहुँदै पनि बैंकिङ बढ्न सकेको छैन।
अर्कोतर्फ पछिल्लो समय बैंकहरुमा निक्षेपको दर बढेको छ। यसले गर्दा व्याजदर नघटे पनि केही हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्ने देखिन्छ। लगानीयोग्य रकम बढ्दा त्यसले बजार बढ्नलाई सघाउ पुग्ने गर्दछ। मर्ज तथा एक्वीजिसनका कारण विकास बैंक तथा फाइनान्सको संख्या घटेकाले लगानीकर्ताले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दा ति समूह बढ्न सक्ने आधार पनि बलियो नैछ।
बजार घट्न र बढ्नका लागि नियामकहरुको कार्ययोजनाले भूमिका खेलेको हुन्छ। तर यतिबेला नेप्सेको प्रमुख पद रिक्त छ। नेप्से प्रमुख को आउला भन्नेमा पनि यतिखेर धेरै लगानीकर्ताको चासो बनेको छ। निवर्तमान महाप्रवन्धक सिताराम थपलियाको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको उक्त पद मन्त्रिपरिषदले नै नियुक्त गर्ने हो।
अर्कोतर्फ राजनीतिक रुपमा वातावरण न धमिल्लिएको न सुधारिएको स्थिति छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १४, २०७४, ०१:२०:२०